कोरोना प्रभावले विश्‍व सेयर बजार ओरालोतर्फ, कुन देशको अवस्था कस्तो ? पुँजी बजार . समाचार६ चैत २०७६
सेयर बजार बन्द गर्न लगानीकर्ताको माग सेयर लगानीकर्ताहरूले सेयर बजार बन्द गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग आग्रह गरेका छन् । लगानीकर्ताहरूका ५ प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधि पुगेर बिहीबार धितोपत्र बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् पुँजी बजार . समाचार६ चैत २०७६
दोहोरो अंकले घटेको सेयरमा ९ वटा कम्पनीले कमाए मंगलबार सेयरबजार दोहोरो अंकले घटेको छ । सेयरबजार परिसूचक नेप्से ४४.३३ प्रतिशतले घट्दा पनि ९ वटा कम्पनीले भने नाफा कमाउन सफल भएका छन् पुँजी बजार . समाचार४ चैत २०७६
सेयर बजारमा 'पहिराे' : ६४.१४ अंकले घट्याे नेप्से साताकाे पहिलाे दिन पनि सेयर बजारमा 'पहिराे' गएकाे छ । आइतबार सेयर बजार परिसूचक नेप्से ६४.१४ अंकले घटेकाे छ । ४.६६ प्रतिशतले बजार घटेपछि नेप्से १ हजार ३ सय १३ विन्दुमा आइपुगेको छ पुँजी बजार . समाचार२ चैत २०७६
४६ अ‌ंकले घट्यो नेप्से मंगलबार झण्डै ६ प्रतिशतले बजार घटेपछि नकारात्मक सर्किट लागेको नेप्सेमा बुधबार भने राम्रो सुधार भएको थियो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार आज नेप्से झण्डै ४६ अंकले घटेको छ पुँजी बजार . समाचार२९ फागुन २०७६
सेयरमा उछाल, ७३ अंकले बढ्दा १ सय ४८ कम्पनीले नाफा कमाए मंगलबार ८६ अंकले घटेर तीन पटकसम्म सर्किट लागेको बजारमा बुधबार हरियाली छाएको हो । सेयरमा हरियाली छाउँदा १ सय ४८ कम्पनीले नाफा कमाउन सफल भएका छन् पुँजी बजार . समाचार२८ फागुन २०७६
हल्लाको पछि नलाग्न लगानीकर्तालाई आग्रह मंगलबार नेप्सेमा आएको गिरावटले सर्वसाधारणमा त्रासको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै सेयर लगानीकर्ता संघ र नेपाल इन्भेस्टर फोरमले लगानीकर्तालाई नअत्तालिन आग्रह गरेका छन् पुँजी बजार . समाचार२७ फागुन २०७६
अधिक ओरालोपछि तेस्रो पटक सेयर कारोबार बन्द, ८६ अंकको ह्रास दोस्रो पटक ४० मिनेट सर्किट ब्रेक लागेपछि १ बजे खुलेको बजार पुन १५ मिनेट कारोबार भएपछि ब्रेक लगाइएकाे हो पुँजी बजार . समाचार२७ फागुन २०७६
नेप्सेमा दाेस्राे सर्किट, ७२ अंकले ओरालो लागेपछि काराेबार बन्द मंगलबार सेयरबजार परिसूचक नेप्से अप्रत्याशित रूपमा निरन्तर घटिरहेको छ । कारोबार सुरू हुनेबित्तिकै घट्न थालेको बजार १५ मिनेटमै ४५ अंकले घट्यो पुँजी बजार . समाचार२७ फागुन २०७६
कोरोना भाइरसका कारण विश्वका प्रमुख बजारमा हलचल कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रास बढिरहँदा विश्वका बजारमा समेत ठूलो हलचल पैदा भएको छ । साउदी अरबले तेलको उत्पादन बढाउने निर्णय गरेपछि तेलको मूल्यमा नाटकीय रूपमा गिरावट आएको छ पुँजी बजार . अन्तर्राष्ट्रिय२७ फागुन २०७६
एनआईसी एशिया क्यापिटलको नयाँ योजना एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडले नयाँ ग्राहकहरूका लागि सेवाशुल्कमा विशेष छुट योजना ल्याएको छ । क्यापिटलले आफ्नो तेस्रो वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर त्यस्तो छुट योजना ल्याएको बताएको हो पुँजी बजार . बैंक/बीमा . समाचार२२ फागुन २०७६
नेप्सेमा नियन्त्रणका बीच ९६ अंककाे ह्रास ५ कारोबार दिनमा २०० अंकले उकालो लागेको सेयर बजार परिसूचक पछिल्लो दुई कारोबार दिनमा १३७ अंकले ह्रास आएको छ पुँजी बजार . समाचार१९ फागुन २०७६
'शेयर बजारको बढ्दो कारोबारमा सूक्ष्म अध्ययन हुँदै छ' सेयर बजार कति विस्तार भइरहेको छ भन्ने कुरा कारोबार रकमले देखाउने पनि हो । अहिले कारोबार रकम निकै बढिरहेको छ । तर, २०-२२ दिन अघिसम्म दैनिक ५०-६० करोडको कारोबार हुने गरेकामा अहिले कारोबार निकै उच्च हो । यस विषयमा हामीले पनि सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका छौँ पुँजी बजार . अन्तर्वार्ता१८ फागुन २०७६
ऐतिहासिक कारोबारका बीच नेप्सेमा ४१ अंकको ह्रास यस साताको पहिलो दिन सेयर बजार परिसूचक नेप्से करिब ४१ अंकले ह्रास आएको छ । लामो समयदेखि ठूलो अंकले ह्रास आएको नेप्से पछिल्लो दुई सातदेखि उच्च अंकले उकालो लागेको थियो पुँजी बजार . समाचार१८ फागुन २०७६
साताको सेयर बजार : साढे १८ अर्बको कारोबार साताको ४ दिन बजार उच्च अङ्कले बढ्यो भने १ दिन सामान्य गिरावट भयो । सातामा नेप्से परिसूचक १९७.६० अङ्कले बढ्यो पुँजी बजार . समाचार१७ फागुन २०७६
कोरोना भाइरसको असर : संसारभरको सेयर बजारमा १२ वर्षयताकै खराब असर कोरोना भाइरसको प्रकोप फैलिएसँगै यसको असर जनस्वास्थ्यमा मात्रै नभएर संसारभरको आर्थिक क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको छ । पहिलो पटक कोरोना भाइरस देखिएको चीनसँगै संसारका कैयौं मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा यसको तीव्र असर देखिएको हो पुँजी बजार . अन्तर्राष्ट्रिय . समाचार१७ फागुन २०७६
लिवर्टी इनर्जीले साधारण सेयर बिक्री गर्ने सेयर २७ फागुनदेखि बिक्री गरिनेछ । आयोजना प्रभावितलाई छुट्याइएको १० प्रतिशत शेयर बिक्री गर्न लागिएको हो । प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँका दरले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने विवरणमा समावेश छ पुँजी बजार . समाचार१६ फागुन २०७६